အလ်ကာအိဒဟ်(အလ်ကိုင်ဒါ)မှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Islam » အလ်ကာအိဒဟ်(အလ်ကိုင်ဒါ)မှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက်
အလ်ကာအိဒဟ်(အလ်ကိုင်ဒါ)မှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက်
Posted by thihayarzar on Jun 8, 2012 in Islam, Members | 27 comments
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي النبي الكريم وعلي اله وصحبه أجمعين وبعد
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ်ကိုင်ဒဟ်အဖွဲ့အစည်းအား နေရာဒေသတစ်ခု သို့မဟုတ် လူမျိုးစုတစ်ခုအတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း အလျင်းမဟုတ်။ သို့သာမက ကျွန်ုပ်တို့သည် الجهاد ماض إلي يوم القيامة ဟူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ မြတ်နဗီ (ဆွ)၏ အမိန့်တော်အား သက်သေပြရန်အတွက်၊ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ အမိန့်တော်များအား လိုက်နာနေသူများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များမှစ၍ မြန်မာပြည်၏ မွတ်စ်လင်မ်များ အခြေအနေ အရပ်ရပ်အား လေ့လာနေကြပြီး၊ စီမံကိန်းများစွာ ပြုလုပ်လျက်ရှိခဲ့သည်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်တို့အား တိုင်ကြားစာ၊ အကူအညီတောင်းခံစာများစွာ ရောက်ရှိလာသကဲ့သို့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်တို့အား လေ့လာခွင့်၊ သိရှိခွင့်များမှာလည်း ယခင်နှစ်များနှစ် မတူပဲဖြစ်နေတော့ပေသည်။
သို့ဖြစ်ပေရာ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ဦးစွာပထမ အသိပေးသဘောနှင့် ဤကြေငြာချက်အား မြန်မာပြည်သူများနှင့် အစိုးရထံသို့ ပေးပို့လိုက်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သဗ်လီဂီမွတ်စ်လင်မ်(၁၀)ဦးအား ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်မှု့နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်ရှိ မွတ်စ်လင်မ်များနှင့် ထပ်တူကြေကွဲခံစားရပါသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ မွတ်စ်လင်မ် လူငယ်များ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအားလုံး အနေနှင့် ၎င်းဆယ်ဦးအား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ သာသနာ့အာဇာနည်များအဖြစ် နှလုံးသွင်းကြရန်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စ်လင်မ်တို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကောင်းမှု့ပွားရန်၊ ဆိုးရိမ်မှု့အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး အဖက်ဖက်မှ ဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာ နေထိုင်ရန်အတွက် ဂျေဟားဒ်အဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်ရန်လည်း လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ မွတ်စ်လင်မ်များသည် အချိန်မရွေး လည်လှီးခံရနိုင်သော အိမ်မွေးကြက်များ မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းပြကြယ်များသည် ကာဖရ်များထံမှ အကောက်ခွန်ယူ၍ သြဇာပြနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော အချက်မှာ- ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှိပ်စက်ခံနေရပါလျှက် လက်တုန့်ပြန်မှု့ မပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ကြသော မွတ်စ်လင်မ်များအား အသိပေးလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်ရှိ နောင်တော်များနှင့် ပတ်သတ်၍ မျက်စိမှိတ် နားပိတ်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အခြေအနေကောင်းမွန်လာသည်နှင့် လိုအပ်သည့် အကူညီများအား ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချို့အချက်အလက်များအား အစိုးရထံတောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ နောင်တော်များအား ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါက လူလွှတ်၍ လက်စားချေသွားမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော အပတ်တွင်ဖြစ်သွားခဲ့သော ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ အစိုးရအနေနှင့် သတ်ဖြတ်သူများအား ပြန်လည်အသက်သေစေခြင်းရှိရမည်။
ထိုကိစ္စနှင့်အလားတူ ကိစ္စများ ထပ်မံမဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
ဘာသာတရားအား လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုပြီး ဗလီ၊ကျောင်းနှင့် သာသနာပိုင်အဆောက်အဦးတို့အား ကာကွယ်ပေးရမည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မွတ်စ်လင်မ်များအား ဖိနှိပ်ခြင်း လုံးဝ စွန့်လွှတ်ပေးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မွတ်စ်လင်မ်တို့အား လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ပေးရမည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့အား စော်ကားသည့် ဆောင်းပါး၊ရုပ်သံ၊ပျက်လုံး စသည့်အရာတို့အား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရမည်။
ဤအချက်ငါးချက်နှင့်ပတ်သတ်၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း အလျင်းမရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် အဆုံးမသတ်သော စစ်ပွဲတစ်ခုအား ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဆင်ခြေကိုမျှ လက်ခံမည်လည်း မဟုတ်ပေ။
(ဤကြေငြာမှု့သည် ကျွန်ုပ်အား ဖုန်းဖြင့် ဌာနချုပ်မှ ပြောပြသည်တို့အား လိုတိုးပိုလျှော့ အကင်းနိုင်ဆုံး ပုံစံဖြင့် မြန်မာစာစီ ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)
လဲသေလိုက် …ခွေးသူတောင်းစားတွေ…မကျေနပ်ရင်ရှိတဲ့ ပွိုင့်ပါအကုန်နှူတ်….မင်းတို့အဖေဘင်လာဒင်
အဲဒီဆိုက်ကိုရေးတဲ့ ခွေးမသားကုလား၊ တွေကိုရှုတ်ချတယ်၊ဘာလဲသူတို့က တောင်ပြန်ချိမ်းခြောက်နေသေးတယ်..၊ ဒီအတိုင်းဆို လက်နှေးနေလို့မရဘူး…ရခိုင်မှာ ရှိတဲ့ကုလားတွေအကုန်သတ်…ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်…..အစကမရှင်းလို့ အခုရှုပ်တာ….
အခုရှုပ်ထားရင် နောင်ရှင်းရတာလွယ်သွားမယ်…. ကြာတယ် အကုန်ရှင်း…
ဒီကောင်တွေ ယုတ်မာတော့မယ် သိသာနေပြီ မင်းတို့လို ငါတို့လည်း အကြမ်းဖက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်တယ်
အယ်လ်ကိုင်းဒါး ဒု-ခေါင်းဆောင် အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – အင်္ဂါ, 05 ဇွန် 2012
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါး ဒုတိယခေါင်းဆောင် Abu Yahya Al Libi ကို အမေရိကန် အဝေးထိန်း ဒုံးလက်နတ်နဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်လိုက်နိုင်တာဟာ အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်အရာရှိတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရ Jay Carney က Al Libi ရဲ့သေဆုံးမှုကို အမေရိကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး သတင်း ရင်းမြစ်တွေအရ အတည်ပြုကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Al Libi ဟာ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အဖွဲ့ရဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်ပြီး သူ့နေရာမှာ ဘယ်သူ့ကို အစားထိုးမယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားမသိရသေးဘူးလို့ Jay Carney က ပြောပါတယ်။
Al Libi ဟာ အပစ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန် အဲ့ဒီ့ဒေသမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ အမေရိကန်အဝေးထိန်းဒုံးလက်နတ်နဲ့ အပစ်ခံလိုက်ရလို့ သေဆုံး သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို စစ်သွေးကြွတွေအချင်းချင်း တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် ချက်တွေကို ကြားဖြတ်နားထောင်တာကနေ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းကတည်းက ပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းက မြောက် Waziristan ဒေသကို အဝေးထိန်းဒုံးနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် Al Libi ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရခဲ့ပါသေးတယ်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးခေါင်းဆောင်သေဆုံးတာကို ပါကစ္စတန်က တာလီဘန်တစ်ဦးက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီး Al Libi အခုလို သေဆုံးခဲ့တာဟာ အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ပြောစကားကို ကိုးကားပြီး သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးဘာသာဆိုတဲ့သဘောလေးမှာ အများလက္ခံနိုင်တဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ထုံးလေးတွေကို
ဒီလို သွားဖျဲပြတာကတော့ ဘယ်ကောင်ကကြောက်မှာတုံး
ဒီလို စိတ်တွေ မြန်မာမွတ်စလင်တွေမှာ မရှိဘူးကွယ်တို့….
အင်း.. ကြောက်စရာကြီးတွေပါလား …
ပြဿနာတွေတော့ အစုလိုက် အပုံလိုက် လာနေပြီလား ရွာသူားတို့ရယ်….။
ရွှေကြည် စစ်မှုထမ်းဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။ တကယ်သာဆိုရင်တော့စော်ကားတာပဲ။
မြန်မွတ်တွေ လှမ်းအကူအညီတောင်းတာလား။ အစိုးရပိုင်းက အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေလို့
လျှော့ပေးနေလို့ ကမ်းတက်တာလား။ မကြောက်ဘူးဟေ့။
မကျေနပ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေ ပြန်ခေါ်ထား။
အစိုးရက ဘာမှကို မလုပ်သေးတာ နှာစေးနေတာ မတွေ့ဘူးလား
မသီတာထွေး အမှုကိုလည်း သေချာမကိုင်
လူဆယ်ရောက်လုံး သေသွားလည်း လျစ်လျူရှုထား
လူအရောက်သေလည်း အရေးစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး
လုပ်ကြံ လီဆယ်ရေးသားထားတာကို မယုံပါနဲ့ လားဗျာ။
ထမင်းစားတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ဘဲစဉ်းစားကြပါအုံး။
ဘာသာတူ သွေးချင်း ရခိုင်များဘက်ကရပ်တည်ကြစို့၊ ဒီလိုနယ်မြေမှာ ဥပဒေ နဲ့ အကာအကွယ်ပေးနေလို့မရဘူး၊စစ်တပ်နဲ့ ကာကွယ်မှရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ရခိုင်တွေ စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ကိုယ့် ဟာကိုယ် ကာကွယ်ကြပေတော့။
ပေါရင်လဲကြည့်ပေါပါ ကိုကိုအယ်ကိုင်းဒါးရယ်။ မြန်မာပြည် ဒီလောက်ဖုန်းလိုင်းတွေမကောင်းတာ ဘယ်ဌာနချုပ်ကနေများဆက်နေတာလားဟင်။ တကယ်က ကိုအယ်ကိုင်းဒါးဂျီး လူဂျီးမင်းနဲ့တွေ့သွားတာပါ။ အဟတ်ဟတ်။
ဘာတွေလာပြောနေတာလဲဗျာ။ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အားလုံးအရေးကိစ္စ၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်တခုအနေနဲ့ စဉ်းစားပြီး ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်မယ်ဖို့မစဉ်းစားပဲ၊ လာချိန်းခြောက်နေသေးတယ်၊ သဂျီးကမဆဲပါနဲ့ဆိုလို့ပေါ့ကွာ။
အလ်ကိုင်ဒါ ….. ရူးနေလား။အခုဟာကရိုဟင်ဂျာကွ။ငါတို့ဗမာတွေသူများပြောတာခုထိယုံတုန်းပဲ။ဒီလိုချိန်မှာဒါတွေမတင်သင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလား။လျောက်မရေးပါနဲ့။မဟုတ်ရင်ရှက်စရာကြီး။ဟီးဟီး။
အယ်ကိုင်ဒါ နဲ့ခြောက်သဗျို့၊ကြောက်စရာကြီး၊ ဗြီး ဟီး ဟီး၊
သေချာ ဖတ်ကြည့်စမ်းကွာ…မုဒိန်း ကျင့်ခံရတဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းတော့ တစ်စက်မှ ထည့်မရေးဘူး..ကုလားတွေ သေတာပဲ တောင်းဆိုသွားတယ်…
ဒို့ အစိုးရက ဘာလုပ်နေတာလည်း…အဲ့ဒါကြီး ဖတ်ပြီး…
စောက်ကုလားတွေ အခွင့်ရေးရတုန်း အစွမ်းကုန် တောင်းနေတာ။ ဒီလိုအခွင့်အရေးကရှားရှားပါးပါးရတာကိုး။ ကြည့်ရတာ သူတို့ကရခိုင်တွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတော့ မသီတာထွေးအမှု့ကိုတမင်လုပ်တာလား မသိဘူး။ ရခိုင်တွေကဘယ်တုန်းကမှ မခံခဲ့တော့အခုလဲမခံလို့ ပြန်ချရင်သူတို့က နစ်နာသူလုပ်ပြီး တသက်လုံ မရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းမယ်ဆိုပြီး များလုပ်တာလားလို့ သံသယဖြစ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု တလောမှာက လူစုပြီး တင်ပြရင်အစိုးရကလိုက်လျောတော့ သူတို့ကဘလိုင်းကြီးလူစုပြီးတောင်းလို့မရတော့ ဒီလိုဂွင်ဆင်တာများလားလို့။
ဘယ်နိုင်ငံသားလည်း???မင်းတို့ ကုလားတွေ နေစရာ မြေမရှိလို့ လက်ခံထားတာတောင်
ကျေးဇူးမတင်ပဲနဲ့ တို့နိုင်ငံလာပြီး ဟိုဟာတောင်းဆို ဒီဟာတောင်းဆိုနဲ့…မကျေနပ်ရင် မင်း
တို့ ကုလားတွေကို အကုန်ပြန်ခေါ်သွား..သြော်..မေ့လို့..မင်းတို့အတွက်ကော နေစရာ မြေရှိ
ဒီလိုအစွန်းရောက်လုပ်ရပ်တွေကို.. ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင်များကိုယ်တိုင်က.. ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချတာပါ..
ဒီလိုအစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းတွေ(ထင်ရတာပဲ) ရဲ့.. တခြားအထောက်အထားအစွန်းအစလေးများ ရရင်လည်း တင်ပေးစေချင်ကြောင်း…
အဲဒီထဲကတယောက်ယောက်နဲ့.. ဗီဒီယိုအင်တာဗျုးလေးများလုပ်ပေးနိုင်ရင်.. ဒေါ်လှ၁၀၀နဲ့ဝယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း…